तथ्यांकोवाच : सस उद्योगका सम्भावना
काठमाडौं (अस) । विगत १० वर्षमा केचप–ससहरूको औसत आयात वृद्धि दर करीब १६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै रू. ६३ करोडको सस आयात भएको छ । कुल आयातमध्ये छिमेकी मुुलुक भारतको अंश करीब ४२ प्रतिशत छ भने सिंगापुरको अंश करीब ३२ प्रतिशत छ । बंगलादेशसमेतबाट करीब रू. २ करोडको सस आयात भएको छ । विश...
काठमाडौं (अस) । नेपालमा आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूमध्ये मोबाइल फोन वा सेलुलर फोन पनि पर्छ । ताररहित सञ्चार सञ्जालको प्रयोगसँगै मोबाइल फोनको प्रयोग र यसको माग विगत केही वर्षदेखि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसको आयातको अवस्था कस्तो छ । विगत ५ वर्षदेखिको आयात प्रवृत्तिलाई भन्सार विभागको प्रकाशित तथ्यांकमा...
तथ्यांकोवाच : वस्त्र उद्योगमा विद्यमान सम्भावना
काठमाडौं (अस) । विगत १० वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा वस्त्रजन्य वस्तुहरूको आयातमा वार्षिक औसत १३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । यो वृद्धिको प्रतिशत मात्रै ठूलो छैन परन्तु आयातको आयतन पनि ठूलै छ । आजभन्दा ठीक १० वर्ष अगाडि करीब रू. १७ अर्ब रहेकोमा हाल आएर सो आयात करीब ४८ अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ...
काठमाडौं (अस) । नेपालको आयात तथ्यांकले हेर्दा सामान्य लागे पनि व्यवसायको प्रशस्त अवसर भएका क्षेत्रको उजागर गर्ने गरेको छ । यस्तै क्षेत्रमध्ये धनियाँ पनि एक हो । गत आर्थिक वर्षमा करीब रू. ५० करोडको धनियाँ आयात भएको छ । विगत १० वर्षको समग्र तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने हो भने धनियाँको आयात वार्षिक २३ प्र...
काठमाडौं (अस) । मुलुकको भूगोल र जलवायु अनुकूल हुँदाहुँदै पनि प्याजको आयात दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । देशमा करीब ३ लाख १७ हजार मेट्रिक टन प्याज आयात हुँदा उत्पादन भने २ लाख ३७ हजार मेट्रिक टनमा सीमित रहेको छ । करीब २६ हजार हेक्टर थप क्षेत्रफलमा प्याज खेती विस्तार गर्ने हो भने मुलुकलाई प्याजमा आत्मनिर्...
काठमाडौं (अस) । मुलुकमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करीब रू. १० करोड बराबरको आलुचिप्स आयात भएको छ । सामान्य प्रविधिको प्रयोग गरी सानो पूँजी र थोरै जनशक्ति प्रयोग गरी उत्पादन गर्न सकिने आलु चिप्सको आयात पनि रू. १० करोड पुग्नुले दुईओटा विषयलाई उजागर गरेको छ । पहिलो आलुचिप्सको उत्पादनमा मानिसको भने जस्तो ध...
काठमाडौं (अस) । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा नेपालमा करीब रू. १४ करोड ६० लाखको तास आयात भयो । मनोरञ्जनको एक साधन मानिने तासको आयात वर्षेनि बढ्दो छ । स्वदेशमा तासको माग बढी रहनु तर स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय नभएकाले आयात बढ्दो क्रममा देखिएको हो । तास जस्तो सामान्य उत्पादनमा पनि मुलुक परनिर्भर रहँदै...
काठमाडौं (अस) । झाडु तथा ब्रसजन्य वस्तुहरूको आयातमा हरेक वर्ष अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । विगत १० वर्षमा यी वस्तुको वार्षिक औसत वृद्धिदर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । १० वर्षअगाडि रू. १० करोड ५० लाखको हाराहारीमा रहेको झाडु तथा ब्रसजन्य वस्तुको आयात गत आर्थिक वर्षमा रू. ७० करोड ६० लाख पुगेको छ, जु...
काठमाडौं (अस) । नेपालमा गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँको ओखर आयात भएको छ । ओखरमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार नेपालमा ओखर आयात बढ्दो छ । गत आवमा ६ सय २ मेट्रिक टन ओखर आयात भएको केन्द्रको तथ्यांक छ । केन्द्रका अनुसार गत आवमा...